Fomba fanao tsara indrindra amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa 5 SaaS Martech Zone
Nandeha ny andro niasa mafy ireo ekipa fahombiazan'ny mpanjifa tamin'ny antso tsy voafetra sy ny mpanjifa. Satria izao no fotoana hampihena kely kokoa sy handraisana bebe kokoa amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa. Ny hany ilainao dia ny paikady mahira-tsaina ary angamba ny fanampiana sasany a Fampivoarana ny fampiharana SaaS orinasa.
Saingy, na eo aza izany, ny rehetra dia tonga amin'ny fahalalana ny fomba fanao mety hahombiazan'ny mpanjifa. Fa aloha, azonao antoka ve fa mahafantatra ilay teny ianao. Andao hojerena.
Inona ny fahombiazan'ny fahombiazana, ary maninona no maninona?
Amin'ny teny tsotra, rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra atolotry ny vokatra anao ny zavatra tadiavin'ny mpanjifa dia misy elanelam-pahombiazana. Ary ity elanelana ity dia mitoetra ao anatin'ilay lava-pifandraisana madinidinika, izay tsy vitan'ny ankamaroan'ny orinasa hameno. Zava-dehibe io elanelana io satria hanakana ny fahafaha-miovaova amin'ny marketing, fitazonana, fivarotana an-tsokosoko, fivarotana be dia be, sns.
Ireto misy fomba fanao dimy voalohany tsy maintsy atitrikao hahazoana ny tampon'ilay drafitra lalao fahombiazan'ny mpanjifa. Topazo maso!
Fampiharana tsara indrindra #1: Manehoa fankasitrahana, valiny hevitra, manorina fifandraisana
Iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahatratrarana ny fahombiazan'ny mpanjifa ny tsy mitsahatra ny maneho ny fankasitrahanao. Ary noho izany, 'misaotra' no mantra mendrika hotononina.
Ny fon'ity fampiharana ity dia mitoetra ao amin'ny nifidianan'ny mpanjifanao anao tamin'ny fifaninanana rehetra nataonao. Ka ny fankasitrahana dia fanamafisana ny mpanjifa fa tena naniry ny tsara indrindra izy ireo. Ankoatr'izay, azonao ampiharina amin'ny dingana maro amin'ny serivisy sy ny fizotranao izany. Ohatra, rehefa miditra ny mpividy dia misafidy fitsapana maimaimpoana, manavao drafitra, na mamela feedback.
Hatramin'ny niresahanay hevitra momba izany dia boaty iray hafa tena ilaina ny manamarina. Amporisiho ny mpanjifanao hanome valiny amin'ny dingana rehetra, ary tsy maintsy mivantana kokoa izany. Na eo aza ny fihainoana ny mpanjifa mandeha lavitra amin'ny fiantohana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, dia kely lavitra noho izany. Raha mampiasa ny tamberina amin'ny lala-mahitsy ianao, dia mety hanampy anao hahita banga amin'ny fahafaham-po.
Ho an'ity, azonao antoka fa hahatratra ny ekipan'ny vokatra ny hevitra. Ary raha azonao atao ny manatanteraka izany amin'ny fotoana tena izy kokoa. Hita izany rehefa afaka mifandray mivantana amin'ireo ekipa vokatra, na mpikaroka ireo mpanjifa, dia matoky tena kokoa izy ireo.
Azonao atao koa ny manao an'io fotoana io hifaneraserana manokana sy hananganana fifandraisana amin'ireo mpanjifa. Na dia sarobidy aminao tokoa aza ny mpanjifanao dia tsy maintsy ampahafantarinao azy ireo mitovy izany.
Fampiharana tsara indrindra #2: Araraoty tsara ny vanim-potoana fampahavitrihana, na vanim-potoana volamena
Toy ny fiheverana voalohany dia fiheverana farany, ny vanim-potoana fampihetseham-batana ho an'ny vokatra rehetra dia harena ankeriny volamena. Io no fotoana ilan'ny mpanjifa amin'ny maody mazoto indrindra hanandramany zavatra vaovao sy fotoana mety. Noho izany mba hahombiazana dia amporisiho hatrany am-boalohany ny fifandraisana mavitrika.
Mamolavola tsangambato fampahavitrihana maro izay tsapan'ny mpanjifa fa tokony harahina. Ankoatr'izay, amboary ho fantsom-pifaneraserana izy ireo izay toa fandresena haingana ho an'ny mpanjifa. Ambonin'izany, ireo hetsika ireo dia tsy maintsy refesina ho anao ary koa amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.
Na izany aza, io koa no fotoana tsy maintsy ahafahanao manome ny tsara indrindra amin'ny serivisinao. Ary io aza no fotoana mety indrindra hahatratrarana ny mpanjifa miaraka am-piandohana miadana na ireo tsy afaka mahatratra ny diany. Na mahazo tanana Vokatra SaaS na mifandraisa amin'ireo orinasa SaaS, fa aza avela hiala io dingana io.
Andao handatsaka fonja volamena! Ny zava-bitanao tamin'ity vanim-potoana volamena ity dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fomba handehanan'ny sisa amin'ny dia nataon'ny mpanjifa. Aza adino ny manome ny tsara indrindra!
Fampiharana tsara indrindra # 3: Mifantoha amin'ny filan'ny mpampiasa noho ny fivarotana lasibatra
Raha vantany vao feno ny orinasa Mpanjifa SaaS eny an-tsambo, manomboka amin'ny fanabeazana ny mpanjifany momba ny fiasa mahafinaritra rehetra izy ireo. Nefa tadidinao any an-tsekoly ny kilasinao amin'ny matematika? Mety nanontany tena ianao hoe rahoviana ny algebra na trigonometry no hanavotra anao amin'ny tena fiainana.
Mitovy amin'ny an'ny mpanjifanao izany rehefa mandavaka azy ireo amin'ny endri-javatra rehetra amin'ny vokatrao ianao. Aza mikoropaka! Mandritra ny fanarahana ireo fomba roa voalaza etsy ambony, dia hahazo sary mazava momba izay ilain'ny mpanjifanao ianao. Ary tsy vola ve ny fotoana? Ka maninona no mandany ny fotoananao sy ny mpanjifanao amin'ny fiasa mety tsy ilain'izy ireo mihitsy, na farafaharatsiny tsy amin'izao fotoana izao?
Mandania fotoana amin'izay ilain'ny mpanjifanao ary avy eo omeo ny vahaolana. Ankoatr'izay dia tsy maintsy manana sofina foana ianao amin'ny olan'ny mpanjifa. Mihainoa aloha, avy eo mametraha fanontaniana mety, ary ampitao avy eo ny fomba ahafahan'ny vokatrao mamaha ny alahelony. Toy izany koa, mety mifantoka amin'ny fanomezana fampiofanana azo ampiharina amin'ny mpanjifa ianao fa tsy teorika lava sy mankaleo.
Fampiharana tsara indrindra # 4: Eritrereto ny B2B ho H2H mba hitazomana tsara kokoa
Ny ankamaroan'ny orinasa dia nandany fotoana sy hery be tamin'ny famolavolana paikady. Saingy avy eo dia manao ny tsy mety izy ireo amin'ny fandefasana azy ireo amin'ny mpanjifa hafa rehetra. Tahaka ny marary roa mety mila fitsaboana samihafa, na dia mitovy aretina aza, dia toy izany koa ny olan'ny mpanjifanao.
Tokony ho azonao fa ny B2B dia tsy maintsy raisina ho H2H. Ataovy ho Olombelona ho an'ny olombelona na ho an'ny fo, araka ny hitanao fa mety, fa ampitao ilay hafatra.
Zarao amin'ireo ekipanao ny tantaran'ny fahombiazan'ny mpanjifa ary ampio izy ireo hianatra izay mandeha sy izay tsy mandeha. Tsy maintsy ampiofaninao tsikelikely izy ireo handray fanapahan-kevitra ad hoc hahafahan'izy ireo manome vahaolana namboarina. Manampy amin'ny fananganana a Paikady marketing SaaS tsara kokoa sy mahomby.
Arakaraka ny ahitanao ny anao orinasan'ny mpanjifa amin'ny maha olombelona fa tsy orinasa, dia vao mainka hanatsara ny fihazonana azy ireo ianao. Mpitantana ny fahombiazan'ny mpanjifa mampiasa an'io politika io no mahatonga ny fitazonana mpanjifa ho malama kokoa.
Fomba fanao tsara indrindra # 5: ampandehano ny fizotran'ny fahombiazan'ny mpanjifa SaaS hahazoana fandresena haingana
Ny mpitantana fahombiazan'ny mpanjifa dia manana andraikitra betsaka, manomboka amin'ny famolavolana ny fizotrany ka hatramin'ny fitandremana ny lisitry ny mpanjifa tsirairay. Na dia afaka mizaha ny fahaizany betsaka aza izy ireo dia mety hivadika ho enta-mavesatra ireo asa ao anatin'ny fotoana fohy. Hisy fiantraikany tsikelikely amin'ny tahan'ny fahombiazan'ny mpanjifanao izany.
Noho izany, ampiasao rindrambaiko ho an'ny fitantanana asa ho an'ny automatique ny fizotranao hahazoana fandresena haingana eo amin'ny sehatry ny fahombiazan'ny mpanjifa. Ny automatisation dia hanome anao toerana handefasana ny fizotranao ary hifantohana amin'ny zavatra hafa toy ny marketing sy ny fanitarana.
Ankoatr'izay dia hanampy anao hampihena ny fihemorana izany ary hamehezana ny fotoana famahana anao. Amin'ny alàlan'ny fivezivezena tsotra nefa feno dia ahafahanao manatona ny mpanjifa rehetra ara-potoana. Ankoatr'izay, hanana fotoana handinihana sy hanatsarana ny fizotrany ho an'ny fahatsinjovana fitomboana tsara kokoa ianao.
Ho valiny ny valiny!
Ka io no ahafahan'ny fahombiazan'ny mpanjifa SaaS marketing mahasoa ny tanjon'ny orinasa lavitra anao. Izy io dia vokatra misy fiatraikany izay afaka mitondra ny fitantanana ny mpanjifanao sy ny fitaovana marketing anao amin'ny toerana iray. Sehatra mora raisina sy azo ovaina izy io izay hanampy anao amin'ny fampitomboana ny fihazonana ny mpanjifa ka hatramin'ny fanaparitahana izany teny mamy izany, maniry mafy izahay rehetra.
Tags: fampahavitrihanab2bmpandeha an-tsambofahombiazan'ny mpanjifaonboardingsaasrindrambaiko ho serivisybanga fahombiazana